4 qofood oo loo qabtay khaarajinta wiil Soomaali ah | Hadalsame Media
Home Wararka 4 qofood oo loo qabtay khaarajinta wiil Soomaali ah
4 qofood oo loo qabtay khaarajinta wiil Soomaali ah
(Toronto) 01 Maajo 2019 – Afar qof oo lala xiriirayo dilka nin ku noolaa magaalada Toronto saddex sano kahor ayaa la qabtay.
Faysal Maxamed Xiis oo 26 jir ahaa ayaa maydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Islington xilli subaxnimo ahayd bishuna ahayd 19 Diseembar 2016.
Monique Ibraahim oo isticmaalaysay magaca Rose Carter, ayaa booliska isu dhiibtay maalintii Sabtidii, sacaado kaddib markii la soo saaray warqad lagu soo qabanayo, waxaana loo haystaa dacwad dil ah.
Maalintiii Jimcihii Boolisku waxa ay xidheen saddex nin dacwadaasi loo haysto oo kala ah; Caadil Seeno oo 21 jir ah ayaa dilka lagu eedeeyay, halka Maxamuud Ducaale oo 27 jir ah iyo Axmed Cabdi Siyaad oo 26 jir ah ay wajayaan dacwad ah in ay gacan ka gaysteen dilka.
Booliska magaalada Toronto ayaa in mudda ah wadey baaritaan ku saabsan sida dilkan uu u dhacay.
Previous articleShirka DF & Maamul-goboleedyada oo lagu wado inuu berri ka furmo Garoowe
Next article”Wejigaa gubay!” – Ilhaan Cumar oo u jawaabtey Ted Cruz oo isku dayey inuu weerarkii Macbadka Yuhuudda iyada ku eedeeyo!